UMiro kwiiCottages zeApple Pickers - I-Airbnb
UMiro kwiiCottages zeApple Pickers
I-Miro yindlu yokulala ene-1 ezimeleyo ehleli elunxwemeni lolwandle oluhle lweWaimea Inlet. Iintaba ezintle kunye nemibono yokungena. Ilungile kuhambo lwemini ukuya eAbel Tasman Park okanye eNelson City. Kubucala kwaye kunoxolo, kodwa yimizuzu emi-5 kuphela ukuya kwiivenkile kunye neekhefi kwilali yaseMapua.
I-Miro yindlu yokulala ene-1 ezimeleyo ehleli elunxwemeni lolwandle oluhle lweWaimea Inlet.
I-cottage ithatha abantu aba-2. Inendawo yokuhlala enesicwangciso esivulekileyo esineefestile ezinkulu, iimbono ezimangalisayo, kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Igumbi lokulala linebhedi enkulu.
Kukho iindawo zokuhlala ngaphandle kwaye ubambe ukukhanya kwelanga nangaliphi na ixesha lemini. Isitiya sabucala sikhokelela kunxweme lwechweba.
I-cottage ixhotywe ngokugqibeleleyo ukuzonwabisa okulula kweholide ye-kiwi ye-bach yangempela kunye neencwadi ezilungileyo, imidlalo yebhodi, i-barbecue, i-hammock, kunye nemibono engapheliyo yokujonga. Kwi-tide epheleleyo unokuphonononga indawo yokungena ezolileyo nge-kayak okanye ibhodi yokubheqa. I-tide ingena kwaye iphuma kabini ngosuku ukuze amanzi kunye neembono zihlala zitshintsha. Ubungakanani bamaza buyahluka ngokwenyanga kwaye kukho iithayimthebhile kwii-cottages zawona maxesha angcono kwi-kayak kunye nebhodi yokubheqa.
I-cottage ine-woodburner kwaye ipholile kakhulu ebusika. Kukho ukhuseleko olululo lweselfowuni kunye neWifi yasimahla.
Ifakwe kumbindi wengingqi yeNelson/Tasman, ejikelezwe zizidiliya zelizwe lewayini likaNelson, esi sisiseko esifanelekileyo sohambo lwemini lokujikeleza ingingqi yeNelson kunye neAbel Tasman, Kahurangi, kunye neNelson Lakes National Parks.
Ummandla weNelson/Tasman unokhetho olungapheliyo lohambo lwemini ukuya kwiivenkile zewayini, iimarike, iigalari, kunye nezitudiyo zamagcisa. Sikwiikhilomitha ezi-2 ukusuka kwi-Great Taste Tasman Cycle Trail. Kukho uluhlu olubanzi lwezinto zangaphandle onokukhetha kuzo, kubandakanya ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela inqanawa, ukukhwela inqanawa, ukuhamba ngesikhephe, kunye nokuloba. Kukwakho nemilambo emininzi emihle kunye neelwandle zokuqubha kunye nepiknikhi. I-Canyoning, i-caving, i-kite boarding, kunye nokuntywila esibhakabhakeni ziinketho zabakhenkethi.
Ngelixa ingasese kwaye ibucala, le ndlu ifikeleleka lula kuNelson; yimizuzu nje engama-20 (iikhilomitha ezingama-24) ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iNelson kwaye ngaphantsi kwemizuzu emi-5 ukuya kwilali eselunxwemeni yaseMapua. Indawo yaseMapua ineekhefi kunye neendawo zokutyela kunye neegalari ezimele amagcisa alapha ekhaya.
Sihlala kwipropati kwaye siyakuvuyela ukunceda kunye nokunika iingcebiso ukuba kuyimfuneko.
Sikwathanda ukunika iindwendwe ubumfihlo buphelele ukuba zikhetha oko.